IIKHABHATHI ZEKHITSHI ZANGOKU (IZIMBO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi zekhitshi zangoku (iZimbo zoYilo)
Iikhabhathi zekhitshi zangoku (iZimbo zoYilo)
Igalari yethu yeekhabhathi zekhitshi zangoku zibonisa iintlobo zoyilo, izixhobo, imibala kunye nokugqitywa.
Igama langoku lixesha elibanzi kwimeko yoyilo lwasekhaya. Inokuthanani nefashoni yamva nje, imeko yangoku okanye isitayile esikhoyo ngoku. Inokubandakanya nawuphi na umxholo woyilo ovele eYurophu, ngakumbi e-Itali, eJamani naseScandinavia ukusuka kwiminyaka yoo-1940 ukuya kuthi ga ngoku.
Isimbo sangoku sikwasoloko sididekile nesitayile sangoku. Nangona eyokuqala ithatha inkuthazo kule yokugqibela, ezi zimbini zahluke ngokupheleleyo kwimixholo yokuhombisa. Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje luhlala lubhekisa kwi-Mid Century yanamhlanje ngelixa isitayile sangoku sibhekisa kwinto ekhoyo ngoku. Isitayile sangoku sinamandla ngakumbi njengoko siqhubeka siguquka, sibonisa iindlela ezahlukeneyo kunye nenkqubela phambili kwishishini loyilo lwekhitshi namhlanje. Ngamafutshane, isitayile sangoku sinokuthetha ngoku okanye kwinto ekhoyo.
Njengoko sele kukhankanyiwe, isitayile sekhitshi sangoku siboleka izinto eziphambili kuyilo lwangoku. Ezi ndlela zimbini zihlala zisetyenziswa ngokungafaniyo ngenxa yokufana kwazo. Nangona kunjalo, indlela elungileyo yokuxela le mixholo mibini yoyilo yahlukile kukuba uyilo lwangoku lunika ukubukeka okucokisekileyo kunye nokusesikweni, ngelixa uyilo lwangoku lunesibindi kwaye luyadlala.
Uhlobo lwangoku lwasekhitshini lukwagxininisa ukusebenza okuphezulu kunye nendawo ehlengahlengisiweyo- zombini ezi zinto zivela kumbutho woyilo lwala maxesha, kodwa isimbo sayo sihlala sibandakanya izimvo zesiko kunye nokuziva okwenyani okufana nokwasekhaya kodwa kunesibheno esityebileyo.
UKUYA Uyilo lwekhitshi yanamhlanje ikwasebenza njengeambrela yeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Kuxhomekeka kwimvelaphi nakwimvelaphi yempembelelo, isitayile sekhitshi sanamhlanje sinokuhlelwa njenge-Urban Contemporary, Casual Contemporary okanye European Contemporary. Uhlobo lwangoku lwasedolophini lujolise kubume basezidolophini kwaye lubandakanya izinto zanamhlanje ezenziwe ngabantu ezinje ngomxube wesinyithi, iglasi kunye nekhonkrithi ukungqina uyilo lwekhitshi oluhle kwaye luqinile.
Ixesha eliqhelekileyo luguqulelo olubekwe mva ngakumbi, kugxilwe kwizinto ezithambileyo kodwa kugcinwe uyilo olulungelelanisiweyo kunye noluncinci. Umthi uhlala ubandakanywa njengenxalenye yolu hlobo loyilo lwekhitshi, ngokungafaniyo nexesha lasedolophini elibingelela ubushushu bemithi yemveli. Ixesha langoku laseYurophu linenkalipho ngakumbi, libukhali kwaye likhazimlisiwe phakathi kwezi ntlobo zintathu.
zinde kangakanani izifungo zomtshato
Nokuba lithini na icandelo, eyona nto iphambili kuyilo lwangoku lwekhitshi yikhabhathi yekhitshi. Ngokwesiqhelo kuboniswe njengodonga olupheleleyo lwee-sleek, iiyunithi zokugcina, iikhabhathi zekhitshi zangoku azihambelani kuphela nee-esthetics zoyilo zale mihla, kodwa zikwasebenza nakwindalo.
Iimpawu zeKhabinethi zangoku zeKhitshi
Izinto ezisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi zangoku
Ukugqitywa kweeKhabhathi zekhitshi zangoku
Imibala yeeKhabinethi zangoku zaseKhitshini
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi eziMhlophe
Iikhabhathi zekhitshi zangoku zaseYurophu
Iikhabhathi zekhitshi zaMnyama eziMnyama zangoku
Iingcango zangoku zeKhitshi
Izixhobo zekhitshi zangoku zeKhitshi
Ikhabinethi yangoku yekhitshi iyatsala
Amanqwanqwa ekhabhathi ekhitshi yanamhlanje
Ukugqitywa kweHardware yeeKhabhathi zekhitshi zangoku
Ikhitshi yanamhlanje engenazixhobo zekhompyutha
Apha ngezantsi sivavanya ezinye zezinto eziphambili zoyilo lweekhabhathi zekhitshi zangoku ukukunceda uthathe isigqibo sokuba ngaba i-aesthetics yabo esulungekisiweyo ilungile na ekhayeni lakho. (Ndwendwela le galari ukubona uluhlu lwethu olupheleleyo lwe Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini )
Ngaphandle kwesiphelo esithandwayo esingwevu sompu, umhlophe ukwasetyenziselwa esi sitayile sekhabhathi senziwe lula, ukusinika ukubukeka okucocekileyo nokucocekileyo ngelixa kugcinwa isibheno sendlu yasemaphandleni yothando.
Iikhabhathi zekhitshi zangoku zaziwa ngokulula, i-aesthetics enesitayile, imigca ecocekileyo kunye neenkcukacha ezincinci. Iimpawu zabo ngokubanzi zibandakanya i-asymmetry, ijiyometri, imigca ethe tyaba kunye nokungabikho kokuhonjiswa. Ukongeza, iikhabhathi zekhitshi zangoku ziyaziwa ngokusebenza kwazo. Nazi ezinye zeempawu ngokubanzi zekhabhathi zekhitshi zangoku:
Ukucoca imigca kunye noyilo olucekeceke -Uyilo lweekhabhathi zekhitshi zangoku zifana nesitayile sangoku ngendlela yokuba iifom zicoceke, zichazwe kakuhle kwaye zilungelelaniswe. Ngokubanzi, inkangeleko yayo yonke intle kwaye intofontofo.
Ugxininiso kwimigca ethe tyaba -Uyilo lweekhabhathi zekhitshi zangoku zijolise kwimvisiswano yomgama. Imigca ethe tyaba inikwa ugxininiso kulwakhiwo lweekhabhathi zekhitshi, ukujongwa kwezixhobo zekhabhathi yekhitshi, i-backsplash kunye neethayile kunye neepateni zokumisa izinto zokugqiba kwikhabhathi yekhitshi.
Izinto zeJometri -Iikhabhathi zekhitshi zangoku zineefom zejometri ezibonakalayo kunye neemilo ezi-angular. Izitayile zeminyango yeKhabhinethi zihlala zibandakanya iimilo zejiyometri ezinje ngemigca ethe tye, izikwere, iingxande kunye nezangqa. Ngelixa izinto ezijikelezileyo kwisithuba ezinje ngezibane zokukhanyisa, iikhawuntari kunye nezixhobo zihlala zibonisa amagophe, iidayimani, iiglobe, iibhokisi, njl.
Akukho nto yokuhombisa Uyilo lwekhitshi lwangoku, ngokubanzi, lubeka ugxininiso ekusebenzeni kunye nakwiminimalism kunokuhonjiswa. Unoko engqondweni, iikhabhathi zekhitshi zala maxesha azinazo naziphi na iindlela zokuhombisa ezinje ngokubumba, iitrayi, imizobo kunye nezinye izinto ezihonjisiweyo. Isitayela sekhabhinethi yekhitshi ihlala ibonisa izitayela ezilula zekhabhinethi ezifana nomnyango wesitayela kunye nomnyango wepaneli.
Elula, izixhobo ezilungelelanisiweyo -Iikhabhathi zekhitshi zangoku zisebenzisa izixhobo zekhabinethi ekhanyayo kunye nesibindi. IKhabinethi iyarhuqa, idibanise amaqhina kunye nezibambo zihlala zinemigca elula neyoqhankqalazayo encedisa kwifom ehlengahlengisiweyo yoyilo lwekhabhinethi yangoku. I-Hardware eyenziwe nge-bar lukhetho olukhethekileyo lwe-Hardware kule ndlela yekhabinethi yasekhitshini. Ngelixa ukugqitywa kwahluka ngaphandle kwentsimbi engenasici, i-nickel kunye ne-chrome.
Izinto ezixubileyo - Iikhabhathi zekhitshi zangoku zisebenzisa umxube wezinto zendalo kunye nezinto zokwenziwa ezinje ngomthi onesinyithi okanye iglasi, ifreyibhodi exineneyo, ii-laminates kunye nezinto zokwenziwa kweenkuni zokwenyani.
Imigangatho epholileyo kunye egudileyo -Ngokungafaniyo nezitayile zeekhabin zemveli ezinemigca eluhlaza, engagqitywanga, iikhabhathi zekhitshi zangoku zigudile kwaye zicokisiwe. Iingcango zekhabinethi yeekhitshi kunye needraw azinakho kuphela ukucoceka okucocekileyo, kodwa izixhobo zayo zihlala zigudile ngaphandle kwebala kunokuba zibhalwe kakhulu.
Imibala engathath'icala enezimpawu ezivakalayo ezinesibindi -Iitoni ezingathathi hlangothi ezinje ngombala omdaka, omhlophe kunye ongwevu yimibala ethandwayo yeekhabhathi zekhitshi zeli xesha. Iinkuni ezifudumeleyo ezinemibala emnyama lukhetho oluqhelekileyo kwaye zihlala zihambelana nombala oqaqambileyo osetyenziswa kancinci kuyilo. Umahluko okhoyo kwiziqithi zasekhitshini zizinto ezithandwayo kwesi sitayile sekhabhathi yekhitshi.
Ukugqitywa kobumnyama obumnyama obusetyenzisiweyo kwezi khabinethi zangoku zasekhitshini kunika isibheno esihle kunye nobunkunkqele, ngelixa iprofayili yayo elula kakhulu inceda ukugcina ukujonga okwangoku kwiikhabhathi. Ukuhanjiswa ngombala omhlophe oqinileyo, umahluko olungileyo wombala wenziwe, ukunceda ukulinganisa ubumnyama kunye nokukhanya okugqityiweyo. Ukugqitywa okufanayo kunye nokulingana kwekhabinethi kuye kwasetyenziselwa ukwenza iikhabhathi zemodyuli.
Izinto zekhitshi zangoku, ngokubanzi, zixutywe ngokudityaniswa kwendalo kunye nokukhethwa ngumntu. Idibanisa zombini iindlela zemveli kunye nezala maxesha ukwenza uyilo olusebenzayo, olusebenzayo kunye nolwexesha elide oluhle ngokulinganayo.
Kwiikhabhathi zekhitshi zeli xesha, izinto zihlala zenziwe ngumntu endaweni yendalo. Eyona nto iphambili kwikhabhinethi yesidumbu okanye ibhokisi uqobo lwayo uqobo lwenziwe ngeplywood, iinkuni ezenziwe ngobunjineli, ibhodi yamasuntswana okanye ifibreboard yobunzima obuphakathi. Ngelixa izinto zokugqiba zihlala zibandakanya ii-laminates, ukufakwa kweglasi enqabileyo, i-linoleum, i-lacquer, ifoyile ye-thermo, ipeyinti, ipholiyesta okanye i-acrylic.
Ezinye izinto zokwenziwa ezinokufumaneka kwiikhikhini zangoku zibandakanya intsimbi engenasici, iiplastiki, ivinyl, i-chrome kunye nekhonkrithi. Izinyithi ezinje ngealuminiyam kunye nentsimbi engenasici nazo ziyasetyenziswa xa kusetyenzwa kwikhabhathi yentsimbi kunye nezixhobo kunye neempawu ezitshoyo.
Izinto zokubala zinokuba lilitye lendalo njengegranite, okanye ilitye eliyinjineli njenge-quartz. Ngelixa i-backsplashes inokuba ziithayile, ilitye lendalo okanye iglasi. Izinto zendalo ezinje ngealuminium, isikhumba kunye namatye zizinto eziqhelekileyo zesitayile sangoku.
Ukwenzela ukudala imeko engacacanga yokujonga indawo kunye nokongeza umdla, uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lukwongeza ukubamba kokugqitywa kwendalo kwizinto ezahlukeneyo zesithuba. Ukudibanisa izinto zendalo kunye nezinto ezenziwe ngabantu kukongeza ubushushu kwaye kuvelise umoya omema ngakumbi.
Izinto ezidityanisiweyo ezidityanisiweyo zizinto ezenziwe ngomthi ngaphezulu kwekhabhathi ye-MDF okanye imiphezulu yeetafile yamatye yendalo edityaniswe nekhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi. Enye indlela yokubandakanya izinto zendalo kuyilo lwekhitshi lwekhitshi langoku kukusebenzisa ukufakwa kwikhabhinethi yeglasi yanamhlanje.
Ngokusetyenziswa kwesinyithi, ii-laminates kunye neglasi, olu luyilo lubonisa ngokucacileyo ukubonakala kweekhabhathi zekhitshi zangoku. Iilaminates ezimthubi ezimthubi zongeza umnwe wobushushu kuyilo, kwaye zithelekisa kakuhle nokupholisa okubandayo kweengcango zekhabhathi yeglasi yealuminium. Unokubona ukusetyenziswa kwemilenze yetsimbi e-tubular njengokutshintsha kwemilenze yomthi eguqukileyo.
Endaweni yokuvumela ubuhle bendalo beenkuni ukuba buphumeze ngokusebenzisa amabala eenkuni kunye neevarnishi, isitayile sekhitshi yoyilo yekhitshi yangoku zihlala zisebenzisa ezinye iindlela zala maxesha ukwenza ukubukeka okungagungqiyo kwaye kubukeke. Umthi sisiphelo esithandwayo, kodwa endaweni yokusebenzisa imithi eqinileyo ngemibala emnyama, izinto zekhabinethi zihlala ziphathwa ngezinto ezithimba kwaye zilingise ubuhle beenkuni zokwenyani, ezinje nge-veneers okanye i-laminates.
Nazi ezinye izinto ezigqityiweyo ezisetyenzisiweyo kuyilo lwekhabhinethi yoyilo lwangoku:
Ukugqitywa kwepeyinti -Ipeyinti ithathwa njengeyona ilula, ukugqiba okusemgangathweni kwikhabhathi yekhitshi. Iyafikeleleka, kulula ukuyisebenzisa kwaye iyafumaneka kwimarike. Ukongeza, ipeyinti inikezela ngenani elingenamda le-shades, evumela abaninimzi ukuba benze ikhitshi yabo yekhitshi kuwo nawuphi na umbala ohambelana nokukhetha kwabo kunye nesitayile.
Kukho iindlela ezininzi zokupeyinta ezisetyenziselwa ukugqiba iikhabhathi zasekhitshini kwaye ezinye zazo zisebenza ngokukuko kwisitayile sekhitshi yangoku enje ngokugqitywa kwepeyinti yeduco kunye nokugqitywa kwethala. Obu buchule bokupeyinta buvelisa ogqibeleleyo, ococekileyo ohambelana nobuhle obuncinci besitayile sangoku.
Ukugqitywa kwepeyinti yeduco kuqheleke kakhulu ukusetyenziselwa ukuvelisa ifanitshala, nangona kunjalo ikwasetyenziselwa ukwenza umbala ongqongqo kunye nokugqitywa kakuhle kwekhabhathi yekhitshi. Ukugqitywa kwepeyinti yeduco kukugqitywa kokufihla okufihla ukugawulwa kwendalo kweenkuni kwaye kuhlala kusetyenziselwa ukufezekisa isicwebezelisi esiphakamileyo, isicwebezela, isatin okanye ukugqibezela okuthe tyaba.
Isetyenziswe ngokutshiza ipeyinti kwizinto eziphathekayo usebenzisa i-compressor. Imveliso iyonke egqityiweyo yokugqitywa kwepeyinti yeduco yindawo egudileyo kunye nokujonga okucocekileyo okunika ukuziva okubizayo kunye nokunethezeka emakhitshini. Obu buchule bokugqibezela busebenza kakuhle kwiikhabhathi zekhitshi zangoku ingakumbi ukuba ufuna ukunamathela kwipeyinti kodwa ungathanda ukulinganisa ukubonakala kwekhabhinethi ekhazimlayo ekhitshini.
Ngokumalunga neentlobo zepeyinti yeekhabhathi zekhitshi zangoku, ezinye zeendlela ezithandwayo zibandakanya ipeyinti ye-acrylic enamel, ipeyinti esekwe emanzini okanye iipeyinti zealkyd. Iipeyinti ze-Acrylic okanye zamanzi luhlobo lwepeyinti equlathe umsi omncinci kwaye inokucocwa ngokulula ngamanzi.
I-alkyd iipeyinti, kwelinye icala, ioyile isekwe, ihlala inevumba elinamandla kwaye isebenzisa imimoya yezimbiwa ukucoca. Zombini ezi ntlobo ziyafumaneka kwimibala engapheliyo enika abaninimzi uninzi lwezinto abanokukhetha kuzo ukugqiba iikhabhathi zekhitshi zangoku.
Eli khitshi langoku lidibanisa ubucukubhede kwaye ligqibe ukwenza intshukumo engaphezulu kunye nobukhulu kuyilo lwayo. Ngeetayile ezimnyama ezimnyama njengesiseko, iikhabhathi ezimhlophe ezigqityiweyo ezimhlophe ngokuqinisekileyo zimi ngokwahlukileyo xa zithelekiswa nombala kunye nokuthambeka komgangatho. Isiqithi sasekhitshini, kwelinye icala, sisebenzisa i-mocha yeetoni ezenziwe ngeplanga endaweni yokumhlophe, ukongeza ubume obufihlakeleyo kuyo obuzalisa ukutyibilika komgangatho kunye nokuchasana nomphezulu womhlaba oqinileyo.
Elaminethiweyo ukugqitywa -Iilaminates zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kuyilo lwekhabhinethi lwangoku kunye nolwangoku, endaweni yoyilo lwesiko. Ngokwenkcazo, ii-laminates ziluhlobo lwezinto zokwenziwa ezenziwe ngamanqanaba aliqela ahlanganisiweyo.
Olu lungelelwaniso lwezixhobo lubandakanya (1) umaleko ophezulu, ubukhulu becala owenziwe ngothango lokhuselo lwe-melamine resin, (2) umaleko wesibini, okwaziwa ngokuba ngumaleko wokuhombisa oqukethe uyilo, ipateni, ubume kunye nombala i-laminate, i (3) isiseko somaleko, esenziwe nge-resin eyomeleza iphepha le-Kraft kwaye okokugqibela, (4) inwebu yokunxiba, engumxube wezinto ezahlukeneyo ezinjenge-aluminium oxides, iphepha kunye nentlaka ye-melamine.
I-Laminates ngokwendalo ziicwecwe ezincinci zezinto zokwakha, kodwa ukwenziwa kwazo okungafaniyo nezinto zibanika umgangatho wokuhlala ixesha elide kunye nokuqina okunamandla.
Ngokubhekisele kuyo nayiphi na ikhabhathi yekhitshi, ii-laminates zihlala zisetyenziswa ngaphezulu kwezinto ze-substrate, njengeplywood yamanzi. Ubushushu, izinto ezincamathelayo kunye noxinzelelo zihlala zisetyenziselwa ukunamathela ii-laminates kwizinto ze-substrate, kuqinisekiswe ukuba azicimi lula.
Uxinzelelo oluphezulu laminate, ngenye indlela eyaziwa ngokuba yi-HPL, yinto eyahlukileyo yelaminate esetyenziswa kwiikhabhathi ezininzi zekhitshi zangoku kunye nakwiikhabhathi zaseYurophu zekhitshi. I-laminates yoxinzelelo oluphezulu ihlala yomelele kwaye iyamelana nomonakalo, kwaye enyanisweni amandla abo anokuthelekiswa nesitopu esomeleleyo. Olona hlobo luthandwayo kunye nomhambisi wee laminates zoxinzelelo oluphezulu yiFormica.
Isibonelelo esiphambili sokugqitywa kwelaminethi kukuqina kwayo okuphezulu. Ngokungafaniyo nomthi owandayo, i-laminates iyamelana nokulwa, ukubuna kwaye inokumelana nokusetyenziswa okunzima. Imibala eyahlukeneyo, iipateni kunye nokuhombisa okubonelelwa ngamalaminethi kwenza ukuba amathuba okuyila angapheli, avumela abaninikhaya ukuba basebenzise nakweyiphi na indlela yoyilo ekhitshini. Uhlobo olwahlukileyo lwee laminates kukugqitywa kweenkuni, okulinganisa ukubonakala kwento yokwenene, yemithi yendalo.
Kwiikhabhathi zekhitshi zangoku, imibala eqinileyo eqinileyo kunye neenkuni ezimnyama zizinto ezikhethiweyo. Ukugqitywa kwelaminethi kusebenza kakuhle kwesi sitayile sekhabhathi yekhitshi kuba kudala indawo egudileyo kunye noyilo olungenamthungo. Kwaye ekubeni isetyenziswa kwimakhishithi, imibala kunokwenzeka ukuba inxitywe xa kuthelekiswa nezinye izinto ezigqityiweyo ezifuna ukusetyenziswa kwebrashi. Isiphumo esipheleleyo sekhabhathi zekhitshi zelaminethi entle zinobuhle, zingenasiphako kwaye zinobunkunkqele obunobunkunkqele.
Ukuziva ngakumbi nge-luxe, eli khitshi lisebenzisa ikhabhinethi egqityiweyo nge-veneers zemithi ye-walnut, ukuyinika ukubonakala kwendalo ngakumbi, ngaphandle kwephrofayili yayo elula. Uyakwazi ukubona ukuba iikhabhathi ezingaphezulu zisebenzisa njani ukuphakama kwesilingi njengoko zinokunceda ukunceda ukwandisa ukugcinwa.
Izixhobo - I-Veneers okanye i-veneers yangempela yeenkuni zincinci zincinci zomthi ezifakwe phezu kwezinto eziphathekayo ukuze zibonakalise ukubonakala kwemithi eqinileyo. Ezi zinto zigqityiweyo zigcinwa kwiphaneli esembindini okanye kwikhabhathi yekhitshini yangaphantsi enjengomthi, i-particleboard okanye i-fiberboard exineneyo. I-Veneer iveliswa ngokusika isiqwenga esikhulu somthi ngokusebenzisa amakhonkco ayo okukhula-obu buchule buthatha ipateni yokugaya kunye nomfanekiso wokhuni.
Ngokwesiqhelo, ii-veneers zingaphantsi kwe-3 yeemilimitha ubukhulu kwaye ziyafumaneka kwiindidi zomthi ezisemgangathweni ezifana nemephu, oki kunye necherry ukubala ezimbalwa. Iza ngokwahluka okwahlukeneyo kwaye inokuba eluhlaza, iphepha lixhaswe, i-phenolic ixhaswe, ibekiwe, iphinde yenziwa ngokutsha okanye yenziwa ngomthi.
Izithambisi zokwenziwa kweenkuni zihlala zisetyenziselwa ukuzinza. Ngokungafaniyo nokhuni oluqinileyo oludla ngokuqhekeka okanye ukudilika, i-veneer iyamelana nale mngcipheko ngokulula ngenxa yokubhitya kwayo. Ukongeza, iglu esetyenziselwa ukudibanisa umaleko omncinci womthi unika amandla omelele ngakumbi. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nezinye izinto, iimpahla zokwenziwa kweenkuni zibiza kakhulu.
I-Veneers zihlala zisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi zangoku ngenxa yokuba ziqikelela ubuhle bokwenyani beenkuni, kodwa zinciphisa umonakalo onokubakho. Isebenza kakuhle ekudaleni ukubukeka okuthe tye ngenxa yokuba iipateni zokugaya zihambelana ngakumbi. Isebenza ngokukuko kwimigangatho ethe tyaba kunye nakwisitayile se-slab yoyilo lwekhitshi yoyilo.
Imibala eqhelekileyo yemithi esetyenziselwa uyilo lwekhabhathi yekhitshi yangoku yeyosapho lwamahlathi amnyama. I-Veneers eneepateni zokugaya ngokuthe tyaba nazo ziyathandwa. Ngokubanzi, iikhabhathi zekhitshi zeli xesha zivelisa uyilo oluhle olubonisa ukufudumala kunye noxinzelelo lwendalo.
Ukugqitywa kwefoyile okanye i-thermofoil -I-Thermofoil lolunye uhlobo lwezinto zokwenziwa ezenziwe nge-vinyl eguqukayo okanye ngeplastikhi yokutyabeka. IVinyl ifakwa ngaphezulu kwefayibha exineneyo okanye iinkuni zobunjineli ngokufudumeza, okukhokelela kwinto eyomeleleyo kakhulu kunye nomphezulu olungeleleneyo onganyangekiyo.
Kukho izibonelelo ezininzi kwi-thermofoil, kodwa esinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni abaninimzi batsaleleka kuyo kukuba bafuna ulondolozo olusezantsi. Ngokungafani nezinye izinto zokugqiba, i-thermofoil ayifuni nayiphi na ingubo yokukhusela. Ukukhathalela kulula njengoko kufuna ukosulwa ngamanye amaxesha kunye nokucoca zonke iinjongo ukucoca intsalela. Iikhabhathi zekhitshi iThermofoil nazo zixabisekile kumgangatho wazo wokumelana nokufuma.
I-Thermofoil iyafumaneka kuluhlu olubanzi lombala kunye nokukhethwa kwepateni. Isebenza kakuhle kuyilo lwekhabhathi ekhitshini kodwa ikwanokuguquguquka ngokwaneleyo ukuba ibunjwe kwiifom ezigoso. Imibala yayo isukela kokungathathi hlangothi njengamhlophe ukuya kwii-hues eziphilileyo njengobomvu, ngelixa uburhabaxa bunokuba matte okanye bukhazimle.
unxiba ntoni umama womyeni ekuziqhelaniseni isidlo sangokuhlwa
Iikhabhathi zekhitshi zeThermofoil zihlala zisetyenziswa kuyilo lwekhabinethi yanamhlanje, kodwa zikwasebenza kakuhle kwizitayile zangoku ngenxa yokuthamba kwazo nokubonakala kwazo. Ukugqitywa kwekhabinethi yekhitshi kuyona ndlela isetyenziselwa ukuyila imibala kunye ne-slab style ekhitshini.
Iziphumo zizonke zeekhabhathi zekhitshi zetekhmikhi zeli xesha zikwayinto efanayo kwaye zingenamthungo kuba umbala usetyenziswa ngokulinganayo kuwo wonke umphezulu wekhabhinethi.
Olunye ujongo oluqhelekileyo oluvela kwiikhitshi zangoku lolu hlobo lwekhitshi yesitayile sotshintsho, apho iikhabhathi ezifakwe ebhokisini ezilula kakhulu zisetyenzisiweyo kwaye zigqityiwe ngemibala yanamhlanje yematte ukufezekisa ukujonga.
Lo mzekelo usebenzisa i-matte gunmetal iikhabhathi zasekhitshini ezingwevu , emva koko uyidibanise kunye ne-walnut eqinileyo ecekecekeceke kwi-countertop yayo, inceda ukongeza imfudumalo kwibala elinemibala epholileyo kunye nemnyama. Ngaphandle kokusetyenziswa kokubumba okuthile, olu luyilo lusenako ukwandisa indawo kunye nokusebenza kwekhitshi ngokusebenza ngokukuko.
Ngokubhekisele kwimibala, iikhikhini zala maxesha zombini zinokuba nesibindi kunye novavanyo, kunye nokulula kunye nokuhomba. Iskimu sombala seekhitshi zangoku sibonisa ukusetyenziswa okuncinci kwemibala elawulwa ngabantu abangathathi hlangothi njenge-brown, whites, grays and taupe.
Umbala ogqamileyo wombala ogqamileyo kwi-hue enesibindi unokongezwa ukwenza indawo ibenempilo ngakumbi kwaye ibonakale. Imizekelo yale mibala igqamileyo ibomvu, ishushu, ilanga, luhlaza okalika, okanye iorenji edlamkileyo.
Ngokwesiqhelo, uyilo lwekhitshi lwangoku luya kusebenzisa umbala omnye olawulayo, ulinganise nabamhlophe kwaye uligqamise ngombala ocacileyo wombala ukwenza imbonakalo ehlaziyiweyo kodwa enomdla. Umbala olawulayo uhlala utsalwa kwikhabhathi yekhitshi kunye nemithi yayo eyenziwe ngamaplanga, umbala wokulinganisa ukusuka kwiindonga, kunye nokuqaqamba okuvela kwinto yokuhombisa okanye izixhobo kwindawo.
Umbala olawulayo unokuphindaphindwa kwisikimu sombala ukuvelisa uyilo oludibeneyo. Ngelixa umbala we-aksenti unokungeniswa kwiithayile ezibuyela umva ezilungisiweyo, indawo yombhoxo kunye nezinye iifenitshala ukwenza iphalethi enesingqi kwisithuba.
Umzekelo, uyilo lwekhitshi lwangoku olunekhabhathi enombala omnyama ingasebenzisa umbala otyebileyo omnyama njengombala ophambili kwisithuba. Oku kuyakuphindwa kwisiqithi sasekhitshini, kwibhokisi yesidlo sakusasa okanye kuya kuncitshiswa phantsi kwizixhobo zeplasbhodi. Emva koko inokuxutywa nabamhlophe ukwenza inkangeleko elungelelene ngakumbi engasindi kwaye inokudityaniswa nezixhobo zentsimbi ezingenazingcingo ukwenza iphalethi ebethayo.
Njengoko sele kukhankanyiwe, umbala olawulayo ekhitshini langoku uvela kwikhabhathi yayo yasekhitshini.
Kwaye ekubeni isikimu sombala oqhelekileyo weekhikhini zangoku zilungiselelwe ukungathathi hlangothi, owona mbala uqhelekileyo wekhitshi yeli khitshi ubukhulu becala yimibala emdaka- ebonakaliswa kukusetyenziswa kweenkuni ezimnyama, ezimhlophe, iigrey grey kunye ne-taupe.
Eyona mibala ithandwayo yekhabhinethi yasekhitshini imnyama ngombala kwaye imhlophe. Imithi embala ophakathi inokuqwalaselwa njengenketho kwabo bafuna ukugqitywa kweenkuni ezifihlakeleyo.
Ngokungafaniyo noyilo lwangoku lwekhitshi olubandakanya imibala ebonakalayo kwikhabhinethi yabo, uyilo lwekhitshi lwangoku lusebenzisa kuphela ii-hues ezinesibindi njengee-aksenti kwisithuba kwaye zihlala zisetyenziswa kancinci kulo lonke isikimu. Iphalethi yombala iyonke yeekhabhinethi zangoku zasekhitshini icokisiwe ngakumbi kwaye isesikweni xa kuthelekiswa namandla e-quirky kunye namandla amnandi ekhabhathi zekhitshi zangoku.
Le khitshi emhlophe emhlophe yangoku isebenzisa ii-laminates ezimenyezelayo kuzo zonke iikhabhathi zayo kunye ne-unifinal yentsimbi engenazingcingo etsala ukwenza ukubukeka okuhambelana kakhulu okwangoku. Iikhabhathi ezingaphezulu zahlulwe zangamabini, iikhabhathi ezisezantsi zisebenzisa iglasi ecwangcisiweyo eyenziwe ngomthi ukubonisa imixholo yekhabinethi, kunye neekhabhathi ezingaphezulu zisebenzisa ii-laminates ezingenanto kuphela.
I-marble yokwenziwa yayisetyenziselwa i-countertop yendawo yokusebenza engenamthungo kunye neethayile ze-mosaic zazisetyenziselwa i-backsplash ukongeza ipateni ethe kratya kwisithuba.
I-White ibisoloko isisitrato kwiindlela ezahlukeneyo zoyilo lwekhabhinethi. Ngokubanzi, umbala omhlophe uthathelwa ingqalelo njengokusilela kukhetho lobungqina kuyilo, njengoko lubonelela ngokuguquguquka, ukuguquguquka kunye nexesha elifanelekileyo. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zithathwa njengezinto zodidi kuyilo lwekhitshi, nokuba inokuba yeyesiko, inguqu, ilizwe, langoku okanye langoku.
Uhlobo lwangoku lwekhitshi luhambelana nombala ongathathi hlangothi olawulwa kakhulu ngumthi omdaka ngokugqitywa ngokugudileyo kunye nesinyithi esityebileyo sesinyithi esihlala sikhatshwa yimibala emhlophe, itaupe okanye ngwevu. Ukulula kunye ne-aesthetics encinci yesitayile sekhitshi yanamhlanje yenza iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini lukhetho olufanelekileyo lokuyila uphawu lwentengiso.
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zangoku zihlala zisaziwa ngobuhle bazo obungapheliyo kunye nobunkunkqele. Umbala omhlophe wedwa uthathwa njengodidi oluphezulu, yintoni enye ukuba idityaniswe noyilo lwekhabhathi ekhitshini, iziphumo ziyamangalisa kwaye ziyathandeka. Isibonelelo esisisiseko esenziwe ziikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kukuba zibonakalisiwe ukuba zimelene nokuvavanywa kwexesha, ke nokuba kungadlula iminyaka emingaphi okanye amashumi eminyaka, uqinisekisiwe ngombala wekhitshi lasekhitshini elingasokuze liphume ngesitayile.
Sebenzisa iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kwiseti yangoku yekhitshi ikwadala ukubonakala okucocekileyo kunye nomoya okhanyayo. Ivuselela i-aura elungileyo kwisithuba, esenza iindwendwe okanye abaninimzi bazive benamandla ngakumbi. Xa kuthelekiswa nekhabhathi emnyama yasekhitshini, iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi nazo zilula emehlweni. Izisa ukukhanya okuqaqambileyo ngakumbi nangakumbi komoya njengoko zinokuphucula iimeko zokukhanyisa kwisithuba ngokukhupha ukukhanya ngcono.
Ngenxa yoko, iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku zikwacetyiswa ngakumbi ukuba zisetyenziswe kwiikhitshi ezincinci njengoko kunokudala ukukholelwa kwendawo enkulu. Ukongeza, ukuba ufuna ukukhuthaza indawo ecocekileyo, engaxutywanga ekhitshini, iikhabhathi ezimhlophe zinokukunceda wenze iqhinga njengoko zibandakanya ucoceko nococeko.
Ngokwendlela yoyilo, iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku zinika okona kuguquguqukayo kunye nokuguquguquka. Ukungathathi hlangothi kombala wayo kusebenza njengombala ongenanto obonelela ngeendlela ezingapheliyo zokuxuba nokudibanisa ezinye izinto ekhitshini. Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zangoku zinokuncediswa nangayo nayiphi na imibala yokuhombisa, nasiphi na isixhobo sombuso kunye naso nasiphi na isixhobo sokhetho somgangatho, udonga kunye nokubuyela umva. Ikwabonelela ngamathuba afanelekileyo okwazisa ngombala wokugqamisa kwisithuba.
Udonga olupheleleyo lweekhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezidityaniswe neendonga ezimhlophe nazo zinokudibanisa ngaphandle komthungo kuyilo lwekhitshi. Ngokuchasene nenkolelo yokuba iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ngamanye amaxesha zinokucaca okanye zibhadle, iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zala maxesha zenza ngokuchaseneyo njengoko zinegalelo kumdla obonakalayo, nto leyo ethi ikhokelele kwindawo entle kakhulu.
Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zangoku zinokusetyenziswa ngokulula ukwenza umahluko okanye ukongeza kumaleko ezinto zokubumba ubunzulu kunye nobukhulu. Inokudityaniswa nezinto ezinomdla wokubuyela umva, okanye udonga olukhanyayo okanye olunombala omnyama okanye umgangatho.
Ngokuchaseneyo, isiqithi sasekhitshini esahlukileyo sinokusetyenziselwa ukophula ucoceko lwekhabhathi ezimhlophe zekhitshi zangoku. Isishwankathelo, iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku zibonelela ngamathuba amakhulu ekukhetheni isitayile xa kuziwa ekudaleni ukulingana kakuhle okanye uyilo lwekhitshi ngokubanzi.
Sebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku nazo ziza nezibonelelo ezibonakalayo. Ukungcola nothuli kunokubonwa ngokulula kumphezulu wekhabhathi emhlophe, yiyo loo nto kulula kakhulu ukuyibona nokucoca. Nangona kunjalo, oku kuye kube yeyona mpazamo inkulu- njengoko ubumdaka buya buqapheleka, ukucoca rhoqo kunye nokusula kuyimfuneko ukugcina ukubonakala kungenasiphako, xa kuthelekiswa neekhabhathi zekhitshi ezinemibala emnyama. Ngaphandle kokubonakala kwayo kwezempilo, imikrwelo, ismudges kunye neplashes zityhilwa ngokulula.
Iinkcukacha zokwakha zangaphakathi zeklasikhi zikwadibana kakuhle noyilo lwekhitshi oluncinci njengalo mzekelo. Ngokusebenzisa yonke imibala emhlophe ngombala ochukumisayo wee-aksenti eziluhlaza, ezi khabhathi zimenyezelisiweyo ezimhlophe ziyasincoma ngokugqibeleleyo isakhiwo esele sikhona, i-blues yongeza i-vibe yangoku kunye nolutsha kwisithuba.
Uyilo lwekhabhinethi yaseYurophu luyaziwa kakhulu ngenkangeleko yalo entle kunye nokugqitywa okuphezulu okuqaqambileyo. Idume ngokuboniswa kuseto lwekhitshi lwanamhlanje, iikhabhathi zaseYurophu zekhitshi zikwalungile kumakhaya esitayile sangoku ngenxa yoyilo olumangalisayo olucacileyo kunye nokulula okumangalisayo.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zichaphazeleka kakhulu ngohlobo lwaseMelika, kodwa lubekelwe bucala ngobunjalo bazo obulunge ngakumbi. Ngeyona njongo yokwakha ikhitshi enobungakanani obuza kulungiselela iindawo zokuhlala ezincinci, iiflethi kunye namagumbi eYurophu, le ndlela yoyilo lwekhabhathi yekhitshi ijolise ikakhulu ekusebenzeni nasekusebenzeni kakuhle kunokuhombisa. Yonke into yayisebenza kodwa ubuhle babungaphazanyiswa.
Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu nazo zakha igama lazo njengohlobo oluphezulu lweemodyuli zasekhitshini zemodyuli. Ukukhuthaza ukwenziwa ngokwezifiso kunye nokwenza ubuqu, iinkqubo zeekhabinethi zaseYurophu zasekhitshini ezivumela abaninimzi ukuba bayile ngokukhululekileyo iikhabhathi zabo zasekhitshini ngokusekwe kwiimfuno zabo kunye neemfuno ezithile kwisithuba.
Uyilo lwekhabhathi yekhitshi engenachaphaza kunye nobuchule bokwakha yenye yeendlela eziphambili zeekhabhathi zekhitshi zaseYurophu. Ukuthembela ekwakhiweni kwebhokisi eshinyeneyo kuzinzo, indlela yokwakha ikhabinethi engenasiseko yasusa isidingo sesakhelo sekhitshi ekhitshini, nesikhokelele ekuyilweni okungaphezulu komthungo, okumanyanisiweyo kwekhabhinethi kunye notshintsho olugudileyo phakathi kweyunithi nganye yokugcina.
Le ideology yoyilo ikwakhuthaze ukufikelela okuphezulu kwaye yabonelela ngokugcina amandla. Ngeekhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ezingenasiseko, kukho ukufikelela okupheleleyo kuba akukho zakhelo zekhabinethi ezinokuthintela ukusebenza kunye nokusetyenziswa.
Ukuqaqamba okuphezulu kugqiba phantse kwangoko kwenza ukuba nasiphi na isithuba sikhangeleke ngakumbi kwanakwikamva. Ukuboniswa koku kugqityiweyo kunceda ukudala ukukhohlisa kwendawo eninzi, kuba ngandlela-thile isebenza njengesibuko xa ichithwa ngokukhanya kwii-angles ezithile. Kungenxa yoko le nto ii-laminates ezimenyezelayo zazisetyenziswa kweli khitshi. Indawo ekhoyo incinci kakhulu, ke ukusebenzisa iikhabhathi eziphakamileyo kunye nokugqitywa okucwebezelayo kunye nokutsala okuncinci kunceda ukuphucula indawo.
Iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zangoku zihlala zinendawo ethe tyaba kunye noyilo olucacileyo, ngaphandle kobukho beziporo ezithe tyaba okanye izitayile ezime nkqo. Olona hlobo kuphela lokuhonjiswa olunokufunyanwa kuyilo lwayo sisixhobo sekhabhathi sekhitshi, esihlala senziwe ngesinyithi kwaye sineendlela ezilula, ezilungelelanisiweyo kunye nemigca ebukhali.
Izinto zokwenza iikhabhathi zaseYurophu zale mihla ziyahluka kwaye zivela kwizinto zendalo ezinje ngomthi ukuya kwezinye iindlela zangoku ezinjenge-MDF okanye iibhodi zamasuntswana. Imiphezulu yekhabhathi ihlala igqityiwe nge-laminates okanye nge-veneers ukubanika inkangeleko ecocekileyo kwaye intle.
Iikhabhathi zasekhitshini zekhitshi zaseYurophu ziyaziwa kakhulu ngokutyikitya kokugqitywa kwe-gloss. Iikhabhathi zasekhitshini zekhitshi eziphezulu zaseYurophu zine-ultra-egudileyo, isipili esifana nomphezulu ophantse wafana nokugqitywa kweemoto. Imveliso yabo ibandakanya inkqubo enzima yabasebenzi ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo njengokuziqengqa okanye ukubrasha kwiidyasi zepeyinti ephezulu, ukupeyinta ukutshiza kusetyenziswa isiguquli, ukusetyenziswa kwethala lethambo kunye nokugquma.
Ukunika iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu indawo ebonakalayo kunye nepolishiweyo, izinto zekhabinethi zigutyungelwe ngezinto ezininzi zokugqibezela emva koko zithotyelwe-indlela yokugqiba edla ngokusetyenziswa kwimveliso yeemoto.
Ngenye indlela ekugqityweni kwepeyinti, ii-laminates zoxinzelelo oluphezulu ziyaqeshwa ukwenza uyilo olwahlukeneyo. IiLaminates ziyafumaneka kumbala obanzi wemibala, ebandakanya ii-hues ezinamandla kunye nokungathathi hlangothi okufanelekileyo ngakumbi kumbala wemibala yeekhontrakthi zekhitshi zangoku. Omnye umbala odumileyo okanye ukugqitywa kweekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zanamhlanje ziyimithi efana nokugqitywa okufana nokubonakala kweenkuni zokwenene.
Ezi laminate zineepateni zokucoca ezahlukeneyo ezinegalelo kuyilo kuyilo lwekhabhathi yekhitshi, emhlophe ngaxeshanye, inikezela ubushushu obufanayo kunye noxinzelelo olunenkuni eqinileyo yendalo.
Phakathi kokugqitywa kwezi zinto zimbini, iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zangoku zijolise ngakumbi kumthi ofana nokubonakala, xa kuthelekiswa nekhabhathi ephezulu yeglass efana nesitayile sanamhlanje. Iilaminati ezinepateni yokugaya ethe tyaba ziyintandokazi yeklasikhi kwisitayile sekhitshi lekhitshi. Ngenye indlela, imibala eqinileyo ecacileyo iyasetyenziswa kwaye olu khetho lubandakanya abamhlophe, abamhlophe, abangwevu, imibala emdaka kunye ne-taupe.
Ngaphezulu kwe-aesthetics eyothusayo kunye nobuhle obahlukileyo obunazo iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu zangoku, kuza ibhonasi eyongeziweyo eyenza ukuba ibe yindleko efanelekileyo yokuthenga ikhaya. Olunye uphawu oluphawulekileyo olunazo iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zangoku kukuqina kwazo okuphezulu, okuziswa ikakhulu zizinto ezisetyenzisiweyo kulwakhiwo kunye nenkqubo enomdla ebandakanyekayo kwimveliso yayo.
Kuthatha amanyathelo aliqela ukomeleza izinto zekhabinethi yokomelela kunye nokuqina, kwaye ukusukela oko kugqityiwe kuqulethwe izinto ezininzi zezinto zokwakha, imibala yeekhabhathi zekhitshi zaseYurophu zale mihla azidleli ngokulula xa kuthelekiswa nepeyinti eqhelekileyo.
Njengoko sele kukhankanyiwe, uyilo lwekhitshi lwangoku ngamanye amaxesha lunokuthatha ukukhuthazwa kuyilo lwendabuko kwaye luyiguqulele kwinto engaphezulu ukuya kumhla kunye nokutsha. Endaweni yokugxila kuphela kukhetho lwangoku kunye nezinto zokwenziwa, uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lunokubonisa izinto zesiko kwisiphelo esihle ngakumbi.
Umzekelo unokusebenzisa ii-veneers zomthi okanye iinkuni ezinje ngee laminates endaweni yento yokwenene, ukhuni lwendalo ukuze kudityaniswe inkangeleko, umbala, ukufudumala kunye nobuhle obahlukileyo bemithi eqinileyo kuyilo. Endaweni yokuhamba ngesiphelo sendabuko njengamabala eenkuni, ikhabinethi yangoku yekhitshi iya kuthi gqolo ukuya kumhla wokugqibela njengokulaminetha. Kwaye endaweni yobungqingqwa bendalo beenkuni, iikhabhathi zekhitshi zangoku ziya kukhetha ukujonga okucocekileyo nangaphezulu.
Iikhabhathi zasekhitshini ezinkuni ezimnyama zizinto ezidumileyo kuyilo lwekhitshi lwanamhlanje. Ubushushu obuzisa emajukujukwini bukhuthaza umoya ococekileyo kunye nowokumema owenza abantu batsaleleke kuwo ngakumbi.
Iikhitshi zomthi ezimnyama zinikezela ngobunkunkqele kwaye zikwasetyenziselwa ukwenza ukubukeka kweklasikhi kuseto lwekhitshi lwanamhlanje. Yongeza ubume, ubunzulu kunye nobutyebi ekhitshini. Ukongeza, iikhabhathi zekhitshi zomthi ezimnyama zangoku zinokuthi nazo zimilisele uyilo kwaye zibonelele ngesiseko esomeleleyo kwisithuba.
Xa zidityaniswe neendonga ezikhanyayo kunye nemigangatho, izixhobo zentsimbi ezingenasici okanye izixhobo zentsimbi, iikhabhathi zekhitshi zomthi ezimnyama zangoku zinika umahluko kwisithuba, esenza ukuba kubonakale ngakumbi. Kwaye njengeekhabhathi ezimhlophe, iikhabhathi zekhitshi zomthi omnyama nazo zinokujongeka okubonelela ngokungathathi cala kwaye zibonelela ngeendlela ezingapheliyo zokuhombisa ekhaya.
Phantse nawuphi na umbala wodonga, i-flooring, i-backsplash, isixhobo kunye nezixhobo ezinokuchasana ngokulula nekhabhathi zekhitshi zomthi ezimnyama zangoku. Ngokungafaniyo neekhabhathi zekhitshi ezinemibala ekhanyayo abaninimzi abanokuthi bayifumane bland, iikhabhathi zekhitshi zomthi omnyama zibonakala ngokulula kwindawo kwaye zinokusetyenziselwa ukwenza ingxelo ezisa ingqalelo yabantu kuyilo lwekhitshi.
Ngokusetyenziswa kwesibane esisebenzayo, ikhitshi langoku elineekhabhathi zekhitshi ezimnyama ezinokubonakala zithandeka kwaye zicolile. Ukuzalisa izinto zoyilo kunye nokukhanya okungasemva okunje njengodonga olumhlophe lwepeyinti, okanye isitayile semibala esenziwe ngombala kunye nezinto zokubuyela umva kunokukunceda ukuba uvele ngakumbi kwisithuba. Izixhobo zentsimbi yebrashi kunye IKhabhinethi iyatsala okanye izixhobo zekhompyutha, kwelinye icala, zinokunceda ukucima umbala wazo omnyama osisityebi.
Iikhabhathi zekhitshi zomthi ezimnyama zangoku zisetyenziswa kakuhle kwiikhikhini ezinkulu njengoko zinokwenza indawo encinci, engakhanyisi kakuhle ukuba izive icinezelekile, inzima kwaye ivaliwe. Inokuncitshiswa phantsi, ngokwazisa into yokulinganisa kwisithuba.
Yintoni eyenza le khitshi yahlukile yindlela ezakhiwe ngayo iikhabhathi zayo. I-veneered emnyama yasetyenziswa kwi-substrate yeplywood yaselwandle kwezi khabhathi zemodyuli. Ukwenza ukubukeka okungaqhelekanga kunye nexesha langoku, ubungakanani bekhabhinethi kunye neengcango zedrowa zenziwe zankulu kwaye zangqinelana ngokusemandleni, zenza ukubonakala okufanayo.
Ukusetyenziswa kwesandla esincinci, esincinci esincinci kuyanceda ukugqithisela kubungakanani beekhabhathi, kwaye kukunceda ujolise ingqalelo yakho kwisiphelo esihle sekhabhathi ebonakalayo.
Uyilo lweengcango zekhabinethi zekhitshi zangoku zinokufana okukhulu kwiikhabhathi zekhitshi zangoku. Zombini ziyilo oluncinci olujolise kwiifom ezilungelelanisiweyo, imigca ye-angular, umphezulu ogudileyo kunye nokungabikho kokuhonjiswa.
Ukulula kulula ukuthathwa njengenye yeempawu eziphambili zeekhabhathi zekhitshi zangoku. Ngokungafaniyo noyilo lwesiko olubonisa ukubumba okunzima kunye neenkcukacha ezimbejembeje ezinje ngombala, imikrolo kunye nemijelo ebiyelweyo, uyilo lomnyango wekhabhathi yekhitshi lwanamhlanje lujolise ekudaleni ifom ye-angular echazwe kakuhle.
Kukho iintlobo ezininzi zezitayile zeminyango zekhabinethi ezisebenza ngokukuko kuyilo lwekhitshi lwangoku oluthi, isitayile se-slab, isitayile sephaneli ethe tyaba kunye nesitayile seShaker. Zonke ezivelisa ikhabethe ekhitshini entle ngokulinganayo.
Nalu ushwankathelo loyilo lomnyango wekhabhinethi yokhitshi oluqhele ukusetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi zeli xesha:
Uhlobo lweslab ucango - Isetyenziswa ngokuxhaphakileyo kuyilo lwekhabhinethi lwangoku kunye nolwanamhlanje, umnyango wesitayile uyaziwa ngokulula nangokungabonakali. Iingcango zesitayile seSlab, njengoko igama lazo libonisa, zibonakaliswa ngesiqwenga esinye, esingafakwanga sisitye okanye islab okanye umthi osicaba. Uyilo lwayo luyacaca ngokucacileyo-ngaphandle kokuhonjiswa okubonakalayo, ukubumba okuhombisa, ukujikeleza okanye ukuhombisa. Umnyango wesitayile se-slab unika iikhabhathi zekhitshi zangoku ukubukeka okuthe tye, okucekeceke kunye nokuncinci.
Iphaneli yeflethi yomnyango Iingcango zepaneli eflethi zibonakaliswe yiphaneli yeziko ethe tyaba kunokuba ibe ngumgqomo, ikhefu okanye iphakanyiswe. Uyilo lomnyango wekhabhathi yekhitshi lolunye uphawu lwentengiso lweekhitshi zangoku ngenxa yendlela ecocekileyo nebukeka ngayo. Uyilo lwayo ngokwesiqhelo lubandakanya umgca omnye wokuhombisa okucacileyo owenza imilo yoxande kwaye usebenze embindini wepaneli yeziko elisicaba. Iingcango zepaneli ezicwangcisiweyo ziza ngeendlela ezahlukeneyo kodwa enye yoyilo lwayo oluthandwayo ngumnyango wesitayile seShaker.
Ikhitshi kunye Imiphezulu yeetafile zecarlac quartz kunye nekhabhathi yesitayile sikaShaker.
Umnyango wesitayile esi Shaker Iingcango zesitayile seShaker ziyaziwa ngoyilo lwe iconic kunye neklasikhi ebonakaliswa ngokulula kunye nokusebenza ngobuhle. Iingcango zesitayile seShaker zijolise kubume bokusetyenziswa endaweni yokugxininisa kumhombiso.
Ngokwenkcazo, uyilo lwekhabinethi yesitayile esijijekayo senziwe ngocango lwesiqwenga ezintlanu kunye nezakhelo zikaloliwe ezijikeleze iphaneli yeziko. Iingcango zekhabethe zekhabinethi zetreyini yangoku yesiqhelo zihlala zenziwe ngomthi kwaye eminye imibala ithandwayo kulwakhiwo lomnyango wekhitshi lwekhitshi kubandakanya amabala amhlophe, amhlophe kunye namabala endalo.
Iingcango zekhabhinethi zeglasi eziqingqiweyo Kwezinye iimeko, iglasi yongezwa kwikhabhathi yekhitshi yangoku ukuze yenze umahluko kunye nokwahluka kubume. Ukufakwa kwepaneli yeglasi kwiikhabhathi zekhitshi zangoku kucacile kwaye akunazitayile zithe nkqo okanye imizila ethe tyaba.
Endaweni yokuba isetyenziselwe lonke udonga okanye isithuba esipheleleyo seekhabhathi ezingaphezulu, iingcango ezenziwe ngeglasi zihlala zisetyenziswa njengesivakalisi sokwaphula izixhobo ezisetyenziswa kwisithuba. Iingcango ezenziwe ngeglasi ezifakwe kwiipaneli zekhabhinethi zekhitshi zihlala zisetyenziselwa ukukhupha iikhabhinethi kwaye zihlala ziza kugqitywa ngekhephu. Ngokubhekisele ekusebenzeni nasekusebenzeni kakuhle, iingcango ezenziwe ngeglasi zibonelela ngokubonakala okungaphezulu kwaye ishenxisa isidingo sokuya ngaphezulu komxholo weyunithi yokugcina xa ujonga into ethile.
Ngokwakhiwa, iingcango zekhabinethi zekhitshi zangoku zihlala zilandela ukugquma okupheleleyo okanye uhlobo olungenasiseko sokwakha. Kuhlobo olungenasiphelo lolwakhiwo lwekhabhathi yekhitshi, ukugqobhoza ngokupheleleyo ibhokisi yekhabhinethi okanye isidumbu. Oku kukhokelela ekubukekeni okucekeceke ngakumbi nangakumbi. Kwaye kuba ulwakhiwo lomnyango wekhitshi elingenasiseko alubonisi naluphi na uhlobo lokuyilwa phakathi kweengcango zekhabinethi yekhitshi, utshintsho olungenampazamo kunye nesithuba esilinganayo esincinci phakathi kweengcango kuyaqinisekiswa.
Ixabisa malini umcwangcisi womtshato
Izixhobo zekhabinethi yekhitshi zinokuqhekeka okanye zenze ukujonga ngokubanzi iikhabhathi zasekhitshini. Yaziwa ngcono njengezacholo zekhitshi, amaqhina, ukutsala kunye nokuphatha ayisiyongezo zomsebenzi kuphela kodwa ikwonyusa ngokubonakalayo isibheno sobuhle sekhabhathi yekhitshi.
Ezi zinto zoyilo ziluncedo zinokusetyenziswa njengesiqwengana esincedisayo se-accessory, zinokudityaniswa ngaphandle komthungo kuyilo lwekhabhathi okanye zinokuma ngokugqwesileyo ngokuchaseneyo nemibala kunye nemibala ekwindawo.
Kukho inani elingenasiphelo lezinto onokukhetha kuzo xa kufikwa kwizixhobo zekhabinethi zekhitshi zangoku. Kukho izinto ezahlukeneyo ezenziwa ngentsimbi, iplastiki, ukhuni, i-ceramic, ngelixa abanye abathengisi babandakanya umxube onomdla wezi zinto ukubonelela ngokuhombisa ngakumbi.
Ngaphandle kokubonisa uluhlu olubanzi lokhetho lwezinto eziphathekayo, izixhobo zekhabinethi zekhitshi zangoku ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, imibala eyahlukeneyo, ukugqitywa kunye nobukhulu obunokutshatisa iintlobo ezithile zoyilo lomnyango.
Izixhobo zekhabinethi zekhitshi yangoku ngokubanzi zinembonakalo entle kodwa enesibindi. Uyilo lwayo lulula, ukanti lubonisa imigca ehlaba umxhwele kunye neprofayili echazwe kakuhle. Phantse naziphi na izixhobo zekhabinethi zekhitshi zangoku zisebenza kakuhle kuyilo lwekhabhathi yekhitshi njengoko bobabini bebeka ugxininiso kubulula, ubuncinci kunye nomhombiso omncinci.
Xa ukhetha i-hardware efanelekileyo yekhabhinethi yekhitshi yokuncedisa ukuyila iikhabhinethi zekhitshi zangoku, gcina i-aesthetics kunye nokusebenza kwengqondo njengoko abasebenzisi bahlala beqhagamshelana nabo imihla ngemihla. Izixhobo zekhabinethi zekhitshi yangoku akufuneki zihambelane nobuhle be-aesthetics kodwa kufuneka zibonelele ngokulula kunye nokufikeleleka ekuvuleni nasekuvalweni kweengcango zekhabinethi.
Iikhabhathi zolu lwakhiwo lwekhitshi zidibanisa uyilo olulula kakhulu lwepaneli, kodwa zigcina imigca ethe tye, egudileyo efana nekhitshi yanamhlanje. Isebenzise ii-veneers ze-oki ngaphezulu kweekhabhathi ukongeza ukubamba kobume kunye nokufudumala kumphezulu, kwaye kuyinika ukugqiba kwe-matte ukujonga okwangoku. Ibala elimnyama elisetyenzisiweyo kwii-veneers zidityaniswe ne-barstool kunye nezibane ezihonjisiweyo zinceda ukongeza ukuziva kwindawo yoshishino ngelixa ugcina ukujonga okucocekileyo nokwangoku.
Iimarike ezikhoyo zibonisa uluhlu olubanzi lwezinto ezinokukhethwa kwikhabhathi yekhitshi eyahluka ukusuka kumanqwanqwa ajikelezileyo kunye nesikwere, ukutsalwa okuncinanana, izibambo ezinde okanye iindlela zemagneti. Nangona kunjalo, kukho iintlobo ezithile ezisebenza ngokusemgangathweni kwisitayela sekhabhinethi yangoku.
Nazi ezinye zeendidi ezifanelekileyo zekhitshi lekhitshi lekhitshi elilungele uyilo oluhlengahlengisiweyo lweekhabhathi zekhitshi zangoku:
Ukutsala kwithebhu -Ukutsala i-tab luhlobo lwekhabhathi yekhitshi ekhwele kumda wekhabhinethi. Ukutsala kwithebhu kunesimo esimileyo se-L kwaye kuhlala kuqhotyoshelwe kwelona candelo liphezulu lomnyango kwiikhabhathi ezisisiseko nakwindawo esezantsi kwiikhabhathi zodonga ngaphezulu. Inokuba ncinane okanye ingaqhuba ubude obupheleleyo bomnyango wekhabhinethi okanye idrowa yokubonakala ngakumbi. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi yehardware luqhele ukusetyenziswa kwisitayile se-slab okanye iingcango zepaneli ezithe tyaba kwaye lusebenza ngokugqibeleleyo njengokuhombisa ukuhombisa iiglass kunye nekhabhathi zokwenza umthi.
Olu hlobo lwezixhobo zisebenza kwakhona njengezinto zoyilo ezinika uphawu ekujongeni ngokubanzi kwekhitshi. Nokuba yeyintsimbi okanye isinyithi, i-tab itsala inika umahluko okhaliphileyo xa isetyenziswa kunye ne-aesthetics encinci yekhabinethi yangoku. Ngaphandle kokubonelela ngokuhonjiswa kwiikhabhathi zekhitshi zangoku, ukutsala iithebhu kukwasebenza kakhulu njengoko kulula ukubambelela kunye nokufikelela.
Efihliweyo okanye ngohlangothi ukutsala Umtsalane ofihliweyo ngandlel 'ithile uyafana nokutsala kwithebhu. Ukufihla okanye ukufihla umda, njengoko igama lisitsho, zekhompyuter zekhompyuter zekhompyuter eziqhotyoshelwe kumda ophezulu womnyango wekhitshi. Uyilo lwayo ngesiqhelo sisiqwengana sesinyithi esiphuma kwinxalenye egungxayo yekhabinethi ekhitshini- ibonakala ngathi sisiqwenga sehardware esifihlwe yikhawuntara yekhitshi elapha ngasentla. Ukutsalwa okufihliweyo okanye komda kusebenza ngokukuko kuyilo lwekhitshi lwekhitshi kuba kunika ukujonga okucocekileyo okungahambelaniyo nezinto kunye nobuhle bekhabhathi yekhitshi. Ngaphandle kwe-aesthetics encinci efihliweyo okanye engqindilili etsala ifa, ikwabanegalelo lokufikelela ngokulula kwii-counter drawers kunye neekhabhathi zekhitshi ezisisiseko.
Izibambo ezihlanganisiweyo - Izibambo ezihlanganisiweyo lolunye uhlobo lwekhabhathi yekhitshi enika ukubonakala okuthe kratya kwaye ngaphandle komthungo kwiikhabhathi zasekhitshini. Izibambo ezihlanganisiweyo zakhiwe kwihardware yekhabethe yekhitshi eneprofayili engaphakathi ngaphakathi. Olu hlobo lwesixhobo sekhabhathi sekhitshi luqhutywa ngenxalenye ebunjiweyo okanye isikhewu esibanjisiweyo esibambe iincam zeminwe. Ngokwesiqhelo, izibambo ezidityanisiweyo zenziwe ngentsimbi okanye ngomthi, ngelixa umbala wayo unokulungiswa ngokuxhomekeka kwinkangeleko ofuna ukuyiphumeza kwiikhabhathi zakho zasekhitshini. Umzekelo, ukudibanisa i-chrome edibeneyo yokuphatha ukuhamba kunye nekhabhathi emhlophe ekhitshini isebenza njenge-metallic accent eyenza umahluko omkhulu kwisithuba. Kwelinye icala, ukudibanisa izibambo ezihlanganisiweyo kunye nombala wekhabhathi zekhitshi zangoku ziya kudala ukubonakala ngaphandle komthungo kunye notshintsho olugudileyo phakathi koyilo lwekhabhathi.
Zimbini iintlobo eziqhelekileyo zokubamba ezizezi i-C yitshaneli kunye no-J wesitishi sensimbi. I-J okanye i-C yesitishi somzila wesinyithi sibonakaliswa yiprofayili yabo engu-C kunye no-J, egxunyekwe ngokupheleleyo kumnyango wekhabhathi okanye ubuso bedraw. Isiporo sentsimbi i-J kunye no-C sitsala zombini zivelisa imbonakalo entle kakhulu kwaye siyile uyilo lwekhabhathi oludibeneyo njengoko ukutsalwa kungancamathelanga ngaphandle kweengcango zekhabinethi kunye nobuso bedraw. Ngokwesiqhelo, uJ okanye C umjelo wesinyithi kaloliwe utsala ukuqhuba isibhakabhaka esigcweleyo somnyango wekhabhathi kunye neyunithi yedrowa, ngaloo ndlela kugxininiswa kuyilo olumiselweyo lwekhabhathi. Kufakwe kwinqanaba eliphezulu lomnyango wekhabhinethi, ukudala uhlobo lwebhanti yezinto ezichaseneyo kunye nokuthungwa. Olu luyilo lwekhabhathi lwekhabhathi luzilungele kakuhle iingcango zepaneli ezithe tyaba kwaye zijongeka zintle kuzo zombini iikhabhathi zekhitshi zekhitshi kunye nekhabhathi ephezulu yokuhombisa.
Nangona kunjalo, kukho ukubuyela umva ekusebenziseni olu hlobo lwezixhobo zekhabhinethi. Ukudityaniswa okuhlanganisiweyo, ngokubanzi, kunokuqokelela ngokulula ubumdaka nothuli ngaphakathi kwamajelo okanye phakathi komsantsa ophakathi.
Ukutsalwa okuvalelweyo -Utsalo oluvalelweyo luhlobo lwekhitshi lekhabhathi yentsimbi egungxulwe ngokupheleleyo kumnyango wekhabhathi okanye ubuso beedrowa, endaweni yokuphuma. Ngokwesiko, ukutsalwa okuvalelweyo kunokufumaneka kwiinkqubo zokugcina iofisi. Ukutsalwa okuvalelweyo kwakhiwe kumnyango wekhabhinethi kwaye kunokuveliswa kwakwimathiriyeli efanayo ukwenza ukubukeka okumanyeneyo, kungenjalo, inokwenziwa kwezinye izinto ukwenza isitetimenti esichaseneyo nesibindi. Ukutsalwa okuvalelweyo ikwayinto onokukhetha kuyo ukuba ufuna ukugcina indawo ethe tyaba kwikhabhinethi yakho. Ezi zihlala zisetyenziselwa iidrawer, iingcango zokugqitha okanye iingcango zesitayile se-slab, kwaye zikhangeleka zibalaseleyo kwiikhabhathi ezinamabala emithi ngokuthelekiswa neekhabhathi eziphezulu.
Ukuba zisebenza ngokwendalo, ukutsalwa okuvalelweyo kuyilelwe ukusebenza ngokukuko kunye nokufikeleleka njengoko kungafiki kwindlela yabasebenzisi. Isetyenziswe kakuhle kwiikhitshi eziphezulu kuba aziphumi emnyango kwaye zinciphisa umngcipheko wokungqubeka kwabasebenzisi kwizixhobo zokusebenza okanye ekubambeni iimpahla.
Ibar iyatsala, ibar yeplati itsaliwe, kwaye usike ibar yokutsala -Ibar iyatsala, yinqumle ibar yokutsala kunye nebar ethe tyaba itsale yonke imisebenzi njengezitetimenti zokwenza iziqwenga, kwaye endaweni yokudibanisa ngaphandle komthungo kuyilo lwekhabhathi yekhitshi, ezi ntlobo zintathu zekhompyuter zenzelwe ukuba zivele.
Ukutsalwa kwebha yenye yezona zixhobo zekhompyuter zekhitshi eziyile ezisetyenziswa kolu shishino. Ukusuka eSpain nase-Italiya, uyilo lweklasikhi lokutsala ibha lubonakalisiwe ukuba luchasene novavanyo lwexesha kwaye lisaqhubeka nokuba lelinye lezona zinto zixabisekileyo kwaye zingaphelelwa lixesha kuyilo lwekhitshi. Ukutsalwa kwebha luhlobo lweehardware zekhabhathi ezithe nkqo, ezihlala zibume buxande kunye neziphelo ezincamathelayo-okanye iziphelo ezinde kunenxalenye ejijekileyo ebusweni bekhabhathi yekhitshi. Ukutsalwa kwebar kunembonakalo entle efanelekileyo ngokufanelekileyo kwiingcango zepaneli ezithe tyaba kunye neengcango zesitayile. Xa usebenzisa ibar yokutsala iikhabhathi zekhitshi zangoku, qiniseka ukuhamba nezinto zoyilo ezenziwe ngentsimbi engenasici kwisiphelo se-satin okanye i-chrome.
Inkunzi yenkomo ethe tyaba luhlobo lwezibambo zekhabinethi ezinemiphetho yesikwere kunye neprofayile ye-angular ebonakalayo. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lekhabhathi lusebenza kakuhle kwiikhabhathi zekhitshi zangoku kuba luyanceda ukukhulisa uyilo kwaye luzise ukujonga okuthe nkqo kwindawo. Ukutsalwa kwe-Flat bar kulunge kakhulu kubhangqiwe ngeekhabhathi zepaneli ezithe tyaba, iidrowa ezithe tyaba okanye iikhabhathi zekhitshi zangoku ezinepateni yokugaya ethe tyaba.
Sika ii-bar ukutsala, kwelinye icala, ziyantlukwano kwinkunzi yenkomo ethe tyaba. Ikwabonakaliswe yiprofayili emboxo kunye noyilo olungqiniweyo, kodwa endaweni yokuba nomphezulu ocacileyo, banqunyulwe kancinane embindini. Ukucinywa kudla ngokuba yijometri kwifom, enje ngesikwere okanye uxande. Cima ibar ye-bar ungasetyenziselwa ukuba ufuna ukongeza isimbo esifihlakeleyo okanye ipunch eyongezelelweyo kwiikhabhathi zekhitshi zangoku. Sika ii-bar ukutsala zibhangqwe kakuhle ngeplani yeefenitshala ekhitshini ekhitshini kwaye zijongeka ngakumbi kumhlaba ocacileyo okanye ngaphezulu kokugqitywa kokuqaqamba okuthelekiswa noyilo lwekhabhathi.
Ezi ntlobo zintathu zekhompyuter zenziwe ngesinyithi kwaye ziza ngemibala eyahlukeneyo kwaye zigqityiwe. Zikwafumaneka ngobude obahlukeneyo, kunye nezinto ezahlukeneyo ezenzelwe ukuba zide zide zibambe iminwe emine. Ukutsalwa kwebar, ibha ethe tyaba kunye nokusika ii-bar ukutsala zibhangqwe kakuhle ngeekhabhathi zekhitshi zangoku zekhitshi okanye iidrowa ezinde.
Ucingo lutsala - Xa kuthelekiswa nokutsalwa kwebar tyaba, iintambo zocingo zineprofayile encinci. Olunye loyilo oluqhelekileyo lokutsala ngocingo yifayile encinci ye-C enamacala amade ajikelezileyo. Kucingwa ukuba luyilo oluqhelekileyo lwekhitshi yehardware yekhitshi, ii-wire pulls zilula, zinobuqili kwaye zisebenza kakuhle ukuba ufuna i-Hardware engakhuphisani nayo yonke ikhabhathi yakho. Nangona incinci ngobukhulu, iintambo zokutsala kulula ukubamba kunye nokufikelela. Ucingo lutsala lusebenza kakuhle nangalo naluphi na uhlobo lweekhabhathi zekhitshi zangoku. Nokuba isicwebezelisi esiphakamileyo okanye isithambisi somthi kwaye ikwasisixhobo esifanelekileyo sokwenza izinto zombane zekhitshi.
Push latch -I-latch yokutyhala yenye yezona zinto zisetyenziswa kakuhle kwikhabhinethi yentsimbi kwikhompyuter yoyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje kuba zibonelela ngendlela ecocekileyo. Iiphushi ze-Push zizixhobo ezenziwa ngoomatshini okanye ngemagnethi ezifakwe ngaphakathi, endaweni yokuba zingaphandle komnyango wekhabhathi yekhitshi. Ngee-latches zokutyhala, akukho siqwenga sesinyithi esibonakalayo kumnyango wekhitshi ekhitshini okanye kwidrowa yobuso, kodwa endaweni yoko isixhobo sifakwe ngasemva okanye ngaphakathi kumnyango wekhabhathi. Iiphushi ezinamanzi zibonelela ngokulula ngokusebenza njengoko zisebenza ngokuthamba kancinci okanye ukutyhala ukuze uvule umnyango. Umnyango wekhitshi owenziweyo osebenza ekhitshini nawo ubonelela ngesiphumo sokuhamba kancinci okanye intshukumo esondeleyo ethambileyo xa ucango luvalwa, kushiya ucango lwekhitshi olugudle ngokupheleleyo kunye noyilo olungenamthungo kwindawo.
Ngokubanzi, amaqhina ekhabhathi ekhitshini athathelwa ingqalelo njengolona hlobo lwekhitshi lekhabhathi yekhitshi kuba zezona zilula ukufaka. Iikhonkco zihlala zifakelwe kwiminyango yekhabinethi yekhitshi okanye ubuso beedraw busebenzisa isiqwenga esinye kuphela. Amaqhina ekhabhinethi aqhelekile ukujikeleza imilo, kodwa eza nangezinye iindlela ezinjenge-oval, isikwere okanye uxande. Ikwafumaneka kuyilo olutsha kunye neemilo ezizodwa ezinje nge-mushroom. Izinto eziqhelekileyo zamanqwanqwa ekhabhathi ekhitshini zizinyithi ezinje ngobhedu, zinc, die cast, intsimbi engenasici kunye nobhedu, kodwa abanye abathengisi bakwakha uyilo kwiglasi, yikristale, ngelitye, ngomthi, ngeplastikhi nakwiceramic.
Njengokutsalwa kunye nokusingathwa koyilo lwekhabhathi yekhitshi yangoku, iiqhina zekhabinethi zekhitshi zangoku zinemilo elula, ukubukeka okuhle kunye nomphezulu ogudileyo. Ngokungafaniyo noyilo lwesiko oluhlala luneendlela zokuhombisa ezinje ngeenkcukacha, i-etching, i-contours kunye ne-motifs, iikhonkco zekhabinethi zekhitshi zihlala zihonjisiwe kwaye zicacile. Iimilo zichazwe kakuhle, imiphetho ethe nkqo kwaye ijolise kwisikwere kunye noxande kunesetyhula. Amaqhina ajikelezayo ngamanye amaxesha ayasetyenziswa kwaye ahlala eneendlela ezilula, eziyiliweyo kodwa ajonge kakuhle. Kukwakho nezinye izinto zangoku ezithatha ikhonkco lekhabhathi ejikeleze ikhitshi, apho iimilo zingaphezulu kweesilinda, zinokubandakanya inotshi encinci okanye ngamanye amaxesha imilo ebunjiweyo.
Amanqwanqwa ekhabhathi ekhitshi yanamhlanje lolona khetho lufanelekileyo ukuba ufuna uhlobo lwezixhobo ezingazukukhuphisana noyilo lwekhabhathi yakho yasekhitshini. Ngaphandle kobukhulu bayo obuncinci, amaqhina ekhabhathi ekhitshi abonelela ngokusebenza okuphezulu kuba kulula ukuwabamba.
Ngenxa yendawo enqongopheleyo ekhoyo, unokubona ukuba iikhabhathi zeli khitshi zikwandisa njani ukuphakama kwesilingi ukuze zisetyenziswe njengokugcina ngaphezulu. Ikhabhathi emnyama ye-wengue, edityaniswe negranite emnyama kunye nentsimbi engenasici yenza ukubonakala okwangoku kunye nomnxeba wobuhle beklasikhi.
Ukugqitywa kwekhabhathi yekhabhinethi yekhitshi efanelekileyo kwiikhabhinethi zekhitshi zanamhlanje zinomgangatho ococekileyo wobugcisa kunye nombala obukhali. Izixhobo zekhabinethi zekhitshi zangoku zihlala zikwimbala yesilivere, zihlala zigqityiwe okanye ziqaqambile. Kodwa kungenjalo, ukugqitywa kwe-matte njengokugqitywa kwe-brashi kunye ne-satin nako kunokusetyenziswa.
Ukunika isishwankathelo esifutshane kwezi zinto zintathu zekhitshi zekhitshi ezigqityiweyo, ukugqitywa okuphekiweyo kubonakaliswa yindawo ekhazimlayo. Ukugqitywa kwebrashi, kwelinye icala, kunepolishi engacacanga, ethi iziswe ngokufaka intsimbi kwinkqubo yokupholisha ebandakanya ibrashi yebristle entle ehamba iphinda-phinde kwicala elinye. Nangona isinyithi siphulukana nomgangatho wokubonakalisa, i-Hardware egqityiweyo ye-hardware ine-touch ethambileyo kubo kwaye inemigca emihle ebonisa indlela yokuxubha into leyo ibiphantsi kwayo.
Ukugqitywa kwesixhobo se-Satin, kunokufana okukhulu kwisiphelo esinebrashi, kwaye sibonakaliswa kukukhangeleka kobisi okuguqukayo kunye neqabaka. Kanye njengokugqibezela okubhrashiweyo, izifundo ze-satin zigqitywa ukubethelwa imivumbo emide, kodwa isandlled emva koko ukususa nayiphi na ipateni ebonakalayo kunye nokwenza imbonakalo engahleliyo.
Nazi ezinye zeentlobo zombala wekhabhathi yekhitshi kunye nokugqitywa kwezi zibini zihamba phambili kwiikhabhathi zekhitshi zangoku
Chrome olukhazimlisiweyo -Ikhonkco lekhabhathi yekhitshi ekhazimlisiweyo ye-chrome ibonakaliswa ngombala oqaqambileyo wesilivere. Ukubonakala kwayo okuqaqambileyo kuyaziwa kakhulu ngokuba negalelo kwisibheno esiqaqambileyo kwikhabhathi yekhitshi. Ikhabhathi yekhabethe ye-chrome ekhazimlisiweyo ilungiswe kakuhle kwiikhabhathi zekhitshi zangoku ezinombala omnyama njengoko zinika umahluko kwisithuba. Kwezinye iimeko, i-chrome ephothiweyo idityaniswe nezinto ezitshatileyo zasekhitshini ukuze zibukeke zomelele kwaye zidityaniswe ngokudibeneyo ngokubonakalayo.
I-nickel ephosiweyo - I-Nickel, ngokubanzi, ithathwa njengenye yeentlobo zezinyithi ezizinzileyo ngenxa yokuba ayinayo imozulu okanye i-rust. Xa kuthelekiswa nezinye izinto, i-nickel yasekhitshini yehardware ihlala ixesha elide kwaye ayifuni kakhulu ukubamba. I-nickel ye-polished eyaziwayo iyaziwa ngokuba yi-chameleon ye-hardware ye-hardware egqityiweyo ngenxa yokungafani kwayo kunye nokukwazi ukudibanisa kakuhle nasiphi na isicwangciso sekhitshi. Ngokwembonakalo, i-nickel ekhitshini yekhitshi yehardware ekhanyayo ine-glossy gloss kunye nombala ongaphantsi okanye ongacacanga. Yeyona khetho ilungileyo ukuba ufuna ukuphatha okanye ukutsala okuya kudibanisa nekhabhathi yekhitshi kunokuba ume ngaphandle. I-nickel eguqulweyo ikwanikezela ngendlela elungileyo yokucima naziphi na iikhabhathi zekhitshi ezinemibala emnyama.
Umnxeba Chrome -I-Nickel chrome inokubonakala kuthulisiwe, umphezulu we-matte kunye nombala omnyama kune-nickel ecoliweyo. Izibini zibini zihamba phambili kunye nekhabhathi zekhitshi zangoku ezigqityiweyo ngamabala okanye ezo zinemibala ethambileyo. Xa ibekwe ngokuchasene nekhabhathi zekhitshi ezinemibala ekhanyayo, i-nickel chrome hardware ibonakala.
Isilivere yesatin - Xa kuthelekiswa nokugqitywa kokugqitywa, i-satin yokugqiba i-hardware inokubukeka okuthambileyo kunye nombala ococekileyo. Isilivere yebala lekhitshi yehardware yentsimbi ibonakaliswa yimatte, ibrashiwe njengomphezulu. Olu hlobo lwesiphelo sekhabhathi yentsimbi yekharityhulam isetyenziswa njengesihombiso esifanelanayo kwizixhobo zentsimbi. Ukugqitywa kwesilivere yesilivere isebenza kuyo yonke ikhabhathi ekhanyayo nekhanyayo emnyama. Inika umbala ohambelana nokuthamba kwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini, ngelixa isebenza njengeyona ndlela ilungileyo yokususa iikhabhathi ezimdaka ngombala nezintsundu. Ibhonasi eyongeziweyo ekusebenziseni izixhobo zekhabinethi yesilivere ekhitshini yesilivere kukuba kulula ukuyigcina xa ithelekiswa nemiphezulu yeetafile epholisiweyo kuba iminwe ayibonakalisi lula kumphezulu wayo.
I-nickel ebrashiweyo - Xa kuthelekiswa ne-nickel e-polished, i-nickel ebrashiweyo inembonakalo ecekeceke ngakumbi kwaye ibonakaliswa kukukhanya okuthambileyo. Isixhobo se-nickel esinebrashi siqhele ukusetyenziswa ukuba ufuna ukutsala kunye nokuphatha ukudibanisa endaweni yoko kubonakala kuyilo lwekhabhinethi. Isixhobo se-nickel esinebrashi silungile ngokufanelekileyo kwiikhabhathi zekhitshi zelixesha ezimnyama.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -Ikhabhathi yekhitshi yentsimbi engenasici yaziwa kakhulu ngokuzinza kwayo kunye nokuzinza okuphezulu, kodwa eyona nto iyenza ibonakale umbala wayo oqaqambileyo wesilivere. I-aesthetics ebukhali, ukucoceka okucocekileyo kunye nokubonakala okumenyezelayo kwentsimbi yekhitshi yehardware yentsimbi yenza ukhetho olufanelekileyo kwiikhabhathi zekhitshi zangoku. Ikhabhathi yekhitshi yentsimbi engenasici engenanto inikezela ngeendlela ezahlukeneyo kuyilo njengoko inokudityaniswa kunye nokukhanya kunye nobumnyama iikhabhathi zasekhitshini. Ukongeza, ikwangumbophelelo ogqibeleleyo kwiikhabhathi zekhitshi ngomnwe we-sheen okanye ukugqitywa okuphezulu kwe-gloss.
Ikhabhathi yentsimbi yekhabhathi engenasici yaziwa ngokuqina kunye nokuqina okuphezulu. Olu hlobo lwesiphelo sekhabhathi yentsimbi sinombala obukhali kakhulu, obonelela ngenkangeleko ecocekileyo kunye nokuqaqamba okumenyezelayo. Eyona nto ibhangqwe kakuhle kukukhanya okukhanyayo kunye nemnyama iikhabhathi zekhitshi zangoku kwaye kukugqibezela okuthe tye, umphezulu ocekethekileyo wokugqitywa kwekhabinethi ekhitshini.
Ukuba awukaqiniseki malunga neekhitshi zesitayile seshishini ngenxa yendlela ebonakala irhabaxa ngayo, olu uyilo lwekhitshi lufezekisa ukulingana okugqibeleleyo phakathi kokucoca kunye nokucoceka, kunye nokuqaqamba koyilo lwesitayile seshishini. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zilula ngokungathi zimhlophe zilaminishwe kwaye zandisa ukuphakama kwesilingi ukuze kugcinwe. Iithayile ezimnyama ezingwevu ezindongeni zinceda ekwenzeni iikhabhathi ezimhlophe zigqame kwaye zibukeke zithe kratya, ngelixa ikhitshi lesiqithi lisebenzisa iinkuni zendalo kwintengiso ukuthungwa kunye nokufudumala kuyilo.
Ezinye iikhitshi zangoku azisebenzisi zixhobo zehardware okanye iikhonkco zekhabhathi yazo ezenza uyilo lwesitayile. Iqukethe iikhabhathi ezivulekileyo ngokutyhala kunye nokubonisa ubuhle beekhabhathi ngaphandle kwesidingo sehardware esi simbo siyenyuka ngokuthandwa. Kukwakho neenkampani ezibonelela ngetekhnoloji enokuphakamisa iingcango zekhabinethi phezulu kwaye kude kude nokuchukumisa okudala ukuziva okutofotofo kunye nokuthamba.
Le kona encinci yekhitshi izama ukwandisa indawo yokugcina ekhoyo kwindawo encinci, ngelixa igcina unxantathu osebenzayo osebenza kulwakhiwo lwayo. Iikhabhathi ezifakwe ipaneli zazifakwe umthi ukuze zinike imvakalelo yeklasikhi kunye nenhle, ngelixa iphelisa ikhabethe okanye iphatha endaweni yokutyhala ukuvula iindlela zokuyinika ukuziva okuncinci.
Lo ngomnye umzekelo obalaseleyo woyilo lwekhitshi lwangoku. Idibanisa iikhabhathi ezenziwe nge-walnut ngegrey & emerald enepeyinti yeglasi ukufezekisa inkangeleko yanamhlanje ngelixa ugcina imbonakalo efudumeleyo kunye nokumema. Iikhabhathi zasekhitshini azinazo iitsali okanye amaqhina, kodwa endaweni yoko zisebenzisa ukutyhala ukuvula iindlela. Isiphumo kukugqitywa okucocekileyo okugxininisa kubuhle beenkuni zeenkuni.
Nokuba indawo ayinakulinganiselwa, iikhabhathi zekhitshi zala maxesha zihlala zithandwa ngenxa yokuba izinto ezisetyenziswayo zihlala zilula ukuzigcina, kwaye uyilo lulula ukudibanisa kunye nokudibanisa neziqwenga ezikhoyo. Isikimu esilula esimhlophe nesimhlophe njengale senza isibheno esihle nesingapheliyo, ngaphandle kokujonga umhla.
Ikhitshini enxulumene neKhitshi yeeGalari onokuzithanda:
Uyilo lweKhitshi lwangoku - Iindleko zokuLungiswa kweKhitshi - Isikhokelo soYilo lweKhitshi
Ngaba kufuneka utshintshe igama lakho emva komtshato
icala elitshayelwe iinwele kwimitshato
indlela yokukhetha umhla womtshato
unqwenela ukuba umtshakazi abe
ubopha njani iqhina lentamo
Iindawo zokuhlala zomtshato ezilungileyo eMexico